Qaramada Midoobay oo lacag ugu deeqday dowladda Soomaaliya – Radio Muqdisho
Qaramada Midoobay oo lacag ugu deeqday dowladda Soomaaliya
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobay ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa deeq lacag ah loogu deeqay dowladda Soomaaliya.
Lacagtaan oo lagu qiyaasay 2 million oo dollar-ka Mareykanka ah ayaa Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in loogu talagay in lagu horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha dowladda Soomaaliya.
Lacagtaan ayaa la sheegay in qeybta hore lagu maalgelin doono gobolada Banaadir iyo Jubbada Hoose ,iyo sidoo kale gobolka kale oo aysan shaacin magaciisa.
Wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya C/salaan Cumar Hadliye oo ka hadlay deeqdan ayaa sheegay in ay tahay labo milyan oo doolarka Mareykanka, islamarkaana wax badan ay u qaban doonto shacabka Soomaaliyeed, isagoo dhinaca kalena sheegay in deeqdan aaney qeyb ka aheyn barnaamijka New Deal-ka.
Sanduuqa horumarinta iyo nabada ee Qaramada Midoobe oo lacagtaan bixiyay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay hadda u baahantahay in laga taageero dhinacyada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in lacagtaan ay si toos ah ugu soo dhacayso bankiga dhexe ee dowladda Soomaaliya ay maamusho.
Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafa+Sawirro
Isbitaal u gaar ah cudurka Qaaxada oo laga hirgaliyey Baydhabo